ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း လွှတ်တော်သို့ တင် - Yangon Media Group
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား မတ် ၄ ရက်က လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းလိုက်သည်။ မတ် ၄ ရက် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအ ဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီက ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအားလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသည့် ဒလ၊ ထန်းတပင်၊ တွံတေးနှင့် ခရမ်းမြို့နယ်တို့ရှိ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အကူ အညီရယူကာ ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့ပြီး ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသည့်ပိုင်ရှင်များ၊ ရေလုပ်သားများနှင့် တွေ့ဆုံမေး မြန်းလေ့လာခဲ့ကြောင်း ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီမှ လမ်းမတော်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အေးအေးမာက လွှတ် တော်အစည်းအဝေး၌ပြောသည်။
”ကော်မတီအနေနဲ့ တွေ့ရှိ ချက်များကို ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၊ ဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့တွေ အကူအညီတွေနဲ့ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခဲ့ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ရေးဆွဲခဲ့ပါကြောင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းအပ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ဥပဒေများသည် ခေတ်နှင့် ဆီလျော်မှုမရှိခြင်း၊ ရေးထုံးများ ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်ခက်ခဲခြင်း၊ သက်ဆိုင်သူများကို ကာကွယ်မှုလျော့နည်းခြင်းများဖြစ်နေပြီဆိုပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်သုံးသပ်ပြီး ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရကြောင်း ဒေါ်အေး အေးမာက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်ထားသည့်အပေါ် အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား အထူးပြောစရာမရှိကြောင်း စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူးရေးသစ်တောနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဦးဟံထွန်းက လွှတ်တော်တွင် ပြန်လည်ပြော ကြားခဲ့သည်။ ”ပြင်ဆင်မှုများကို လေ့လာ လိုက်ရင်လည်း ခေတ်ကာလနဲ့အညီ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အခြား ဖြည့်စွက်သင့်တဲ့ကိစ္စတွေကို ဖြည့် စွက်ထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ပြင်ဆင်ချက်ကို ကန့်ကွက်ရန်မရှိပါဘူး။ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်တင်ပြပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ယင်းဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက အစီရင်ခံစာဖတ်ကြား တင်ပြခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးလိုသော ကိုယ်စားလှယ်များ အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းတို့ကို ဒုတိယအကြိမ်တိုင်းလွှတ် တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးများ၌ ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင် ထွန်းက ပြောသည်။
မတ် ၄ ရက်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးပြီးဆုံး ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်အစည်းအ ဝေးများ ရပ်နားထားချိန်တွင် ယင်းဥပဒေကြမ်းကိုလေ့လာ၍ နဝမပုံမှန် အစည်းအဝေးအတွင်း ဆွေး နွေးစရာများရှိပါက ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောသည်။
ယခု ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းမှု ယမန်နှစ် ကာလတူထက် ကန်ဒေါ်လာ ၃၆၅ သန်းကျော်ေ
၁၉၈၇ နျူးကလီးယားစာချုပ်မှ ရုရှားနုတ်ထွက်ကြောင်း သမ္မတပူတင် ကြေညာ
ရွှေနှင့် လက်ဝတ်ရတနာ One Stop Service Center ၌ အဂတိလိုက်စားမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် စင်တာတွင် လာရောက်ဆောင်ရွက??
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂ဝ၁၉ မှ ၂ဝ၃ဝ အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စုစုပေါင်း ကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၂ဝဝ ဝင??
”လက်ထပ်ဖို့ မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး” Kaley Cuoco
ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲတွင် လီဗာပူးအသင်း လက်မှတ်ခွဲတမ်း ၁၆ဝဝဝ ကျော်သာရရှိ